यस्तो रह्यो ७६ को राजनीति ! – HostKhabar ::
यस्तो रह्यो ७६ को राजनीति !
अन्नपूर्ण पोष्ट/ काठमाडौं : नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमै जेलिइरहे- वर्ष ०७६ भरि। पार्टीभित्रको आन्तरिक विधि, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा नेताको हैसियत, बहुमत र भागबण्डाको राजनीतिमा नेकपा र काँग्रेस अलमलमा रहे।
काँग्रेसको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। पार्टी संगठनभित्रको भागबन्डामा सो पार्टीमा ६०÷ ४० संस्थागत नै भयो। महाधिवशेन कार्यतालिका पहिले ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा देउवा(पौडेल चर्काचर्की परिरह्यो। विचार तथा अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समेटेर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको विषयदेखि महाधिवशेन कार्यतालिकाका विषयले पार्टी विवादमा पर्यो। पौडेल पक्षले यसैका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक समेत वहिष्कार गर्ने अवस्था आयो। अन्ततः फागुन ०७७मा महाधिवशेन गर्ने गरी महाधिवशेन गर्ने काँग्रेसको कार्यतालिका बनेको थियो। तर, अन्य आन्तरिक कलहबाट काँग्रेस अझै उम्कन सकेको छैन।
०७६ मा कतिपय चर्चित नेताको चरित्रमाथि दाग लाग्यो। अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको